Oromoon Lamafaa Habasha jala hin hiriruu, Hariiroo ilee waliin hin tolchatuu!!
Gummi Paarlamaa Oromoo 03/01/2012
Ummataa Oromoo Hundaaf
Yaa Uummata Oromoo Gantooni biyya kee keessati gudatan sii ganani jiru, Guddifachan ati bake futee gudifatee fi galtuun nama goteee sii ganani jiru., Seeran ala horma kan atii dhalchitee makkon/jaldhufii ilee Oromoo gananii diina dukkaa hiriran jiru. Isaan yerro ilman kee wayee qabsoof dararaman, saamichan malaqa horaniin sii dhabamsiisuuf iitin hojjachaa jiru. Habashooni yomilee yakka Oromoo irratti dalaganti gabaani hin beekan, Dhifama gaafachuu yaadan hin beekan. Uummataa Oromoo irratti yakka dalaguu isaani amanani hin beekan. Habashoon Haraan -Wayyanen/TPLF lafa keenya gurgurte, qabenya keenya hunda dhuunfatte ijoolee keenya gara jabinan ajeesaa kaan hitee, Shamaran Oromoo irrati yakkaa heedu rawwatte jirti. Uumataa ollaa akka Beneshangulii fi Somalee hidhachiftee Oromoo ficisisa jirti. Afaan Oromoo baleesuun, adda Oromoo dhoksuun, eenyummaa Oromoo baleessa jirti. Baratoota Oromoo University hunda keessaa funantee hitee jirti, kaana moo barumsaa isaani irraa aritee jirti. Kanaafu, Habasha Irraa waan Edduu hin qabdu, goola kee itii hin argsisin, lafa kee irra hin dabarsiin, dhaabni habasha kamuu lafa Oromoo irraa darbuun du’aa kee booda ta’uu qaba. Irraa bituu fi iitigurguruu, waliin nyachuu f i dhuguu dhisii. Diina sabaleesuuf deeman waan ta’aanf waan dadeesen of irraa qooladhuu.
Baratoota Fi Dargagoota Oromoo biyya keessati Dararama jirtuuf:
Guyyaa fi Halkan Oromooti dukanayee jiru kun ifaatii ba’uuf akkasi dukana’aa. Ajeechaan, hidhan, reebichii fi torurchn hamaan ilmaan Oromoo irrati gegefamaa jiruu kun lafa dhiyooti ni dhabataa. Diini keenya hundi iffa ta’aan jiru, namaoon Qabsoo Oromoo wagoota dheeraf takkalan qaban ilee yerroon saxlaa jira. QabsooOromoo malaqatii gurguracha turan ilee wal calala jiru. Qabsoo Oromoo kessa ta’aaiin dhaabbilee Oromoo diggan Hawwassa Oromoo facasan warii wal dura dhaabata turan gara Habashatti deemani jiru. Oromoon qulquluun harka wal qabatee deemuuf murteefatee jiira. Kanaafuu Dhiigi dhangala’e qamii kee lalatee qabeenyaan kee badee hundi beenya argachuuf deema; Bilisumman amoo arisa malee hin jiru Arisaa hin soodatiina - Bilisummatuu duba jira waan ta’eef. Qabsooti ifufa teenye siin ilaaluu dunee Bilisoomana
Dhabbilee Oromoo biyya kessaa jirtaniif;
Ginbot 7 dhaabilee Oromoo jala addemee ABO diiguuf tattaafachaa jiraachuu isaa hubatani jirtuu? Madrak UDJ, Qinjit, MEAD, EPRP, TPLF kkf Dhaabilen Habasha hundi diina kessanfi wara Qabsoo Oromoo baleesuuf ijaramee ta’uu yerro heedduu irra deedebine isbine jirra. . WFDO/OBK of fuldura qabatan Oromiyya seenuuf deemu waan ta’eef Miseensooni WFDO fi OBK Habasha Haraasi ta’ee Habasha Moofaa of irra dorkii. Habasha Moofan Uumataa Oromoo walaka ½ fixee kan hafaan amoo Harka, Harma fi Sala muree garbonfatan, Habasha Haraan Tigree amoo waan ini isiin goocha jiru ni beektu. Kanaafu, utuu gubatan Abida Habasha gara birra keessa lixuuf hin yaadinaa, Oromoon ergamtuu ta’uu hin barbaduu of hin gooyomsina. Namoon tokko tokkoo aangoof garmalee susoftan (hawwitan) aangoo Habasha irra qoodachuuf saba gudda kana hin qaneesina. Dhabadha of ilaala. Kessumatuu Misensoon WFDO Kibba – Kabbaa, Baha –Lixaa Oromoo jirtan hundi Qunmamiti atatama Humachuun siirna TPLF of irraa kassuf qabsoo goochaa yamuu jirtanti siirna Minilik isiinti Deebsuuf Dhabbilee Habashoota biyya keessa fi biyya alati wal qunamman Oromoo deebsani gaboonfatuu deeman dura dhabachuun dirqama keessan akka batani isiin gafaana.
Miseensoota Dhaabba OPDO Hundaaf
Utuu isiin Miseensoon OPDO hedduu dha jachaa jirtanuu Ilman Tigray nami 1000 hin tanee Oromoo samtee, ajeeftee, hitee fixaa jirti. Kun salphina ta’uu ni beektuu? Miseensoota WFDO, OBK fi Baratoota Oromoo University hunda keessa TPLFn falmataa jiran qabdani hidhatii guruun keessan of baleesuu dha. Namoon isiin hidha jirtan kun Obboloota keesan wara borii isiin birra goree Ginbot 7/TPLF isiin irra loluu, obboleessa keessan hitani ajeessa jirtu Dhisaa!! . Siiyassi yeroo hunda dafee jijirama, dhabbilee ni baduu siyyasi ni jijjiiramaa, garuu eenyummaa fi Oromummaan keenya nu waliin hafa, Oromoo lamii keessan hin midhina. TPLF waan hunda samatee Tigrayti galuuf Meeshaa xaxachaa jirti. MADRAK/Ginbot 7 amoo Minilikin Deebsuuf Jijiiramaa gartuu ijoolee ganda tokko Yaabatan gulufaa siiti dhufaa jiruu Oromoo sii biira jiru miiduun dhaabbachuu qaba. siin jachaa jirra. Siiran garboonfata Tigray of irra buqisuuf qoophaii hojeedhu Nafxanya Moofa siiti dhufaa jiru ilee waliman of irra qabuuf of qoophesi. OPDO hin gooyoomin! Uummanni Oromoo Bilisummaa barbadaa kanneen bilisummaaf falman waliin dhaabbadhu. Ilmaan Tigray, Ilman Amhara, Makoo fi Jaldhuffi isiin keessati wal ijaran ilee siiritii to’adha isaan ilee Kayoo Minilik dhoksan batatani isiin keessa jiru. Gorsi keenya kan maayyii Baratoota Oromoo hin hidhiin, Miseensoota WFDO fi OBK hin hidhin borii isaantuu lubbuu keessan bararaa. Diin Oromoo bayee dha diina dhiftee lammii kee baleesuu irrati hin booba’iin. .
Dhaabbilee Oromoo Siiran Habasha lagatan hundaaf:
Garboonfatan Qabsoo Bilisumaaf Tumsee seena keessa hin jiru, Europa fi USA feedhi mata isaan malee feedhi Uumataa yaadant hojeetani hin beekan. Europa fi USA Mootummota Mabbotoo Sesesekoo, Edi Aman Dada, Sadam Husen, kkf Abbotii Hirre hamoo wara degera turan. Amalee Melese Zenawi Oromoo fixaa jiru deegera jiru. Isaan kan degeran yerro hunda bu’aa ofii isaan qoofa. Oromooni Milyoona 40 taanee humna Tigre Miliona 3 ari’uu dadhabene sababa heedu tarrisuun siiri miti. Quruphee laga jirutuuf Foon irrati waloon beekuma moo walaluma? Yoo tokko tanee hunman tanee Oromoon hundi nu deegera adunyan hara nu tufatuu kun borii wajjira keenya balbala dhabata. Dhaabba laafaa amoo uummani isaaf qabsoofnu iyuu hin jalatuu. QC-ABO, Shane –ABO, ULFO fi siirna Habasha kan lagatan hundii Haala duree tokko malee marii atatama gegesuun Qabsoo Uumataa Oromoo tokkummaan gaggeessuf muurtee keessan isaa dhumaa barbana. . Ama yerro waan hunda ifaa ta’ee Gartuun Habasha qofaati bayee kana dhabbileen Oromoo hundi waliin deemuu qophidha jeena amana. Kun ammoo akka kanan dura Arara adeemsisuun yerro baleesuu utuu hin tanee Haala ifaa ta’ee bayee kana irrati hundaa’uun Kayyoo ummani Oromoo iiti wareegama ture waliin qabnuu sun qoofa bu’uureefanee waliin deemuu ni dandeenya. Yerro Murassa kessati Konferense Waloo waliin gegesuun akka Milkoofnuuf qoophiif debbi keessan egana.
Hayyoota Oromoo hundaaf:
Dhaamasaa fi Eergaa Kana oli qoophessuf Konferense Biyya hundaati fi Konferese waloo qoophessuf ga’een Hayoota Oromoo murteesadha, Jarsooliin Oromoo, Hawwassi Oromoo fi lamiin Oromoo hundi tarsimoo adda kana irrati qooda fudhachuu qabu. Biyoota hunda kana keessati Konferenesi ji’oota dhufaan kana keessa gegesun Gara Konferense waloo bakka bu’oota kana qoophitti deemuuf Hayoonni Oromoo, Jarsoolin Oromoo, Hawwasii hundi hirman goochuu qabu, Prof. Mohamad Hasan, Prof. Makuria Bulcha, Prof. Asefa Jalata Prof. Bicaaqaa , Dr. Zelalem Banti, Dr. Addisu fi Beektoon Oromoo Hafaan kan birroo kkf Qindesitoota saganta kan akka nu ta’aan ilee kabajan gaafeerra.ana.
Injjifannoo Uumata Oromoof!!!!
Gummi Paarlamaa Oromoo
Patriottenstraat 62, 2600
GSM +32(0) 488 47 93 60
“Hiimaa Dhiiddeen Du’aa Hin Didduu” jiradha Oromoo link kana dubsa hunda isaa . Gulaalaa